Actorylọ ọrụ Cast Iron Enamel Cookware - China Cast Iron Enamel Cookware Nsukka, Ndị na-eweta ya
Ngwaahịa Ngwaahịa niile
1. Mkpa ọkụ na enamel mara mma zuru oke maka esi nri na ije ozi. Scratch na-eguzogide, unyi na-eguzogide, na-adịghị egbu egbu, matte ojii enamel ime elu.
2. Aka jidere n'aka, akụkụ dị obosara maka nkasi obi na nkwụsi ike.
3. Isi ala na-emepụta ihe na -eme ka ndị ọzọ na-ekesa okpomọkụ.
4. Ihe eji eme eriri mkpuchi eji eme ka imechi basting nke ọma maka nri dị oke mmiri.
Ihe E Dere Ederede: JT101, JT102 Ihe: Enamel Size: DIA: 25 * 5 5.26 * 5.5 Mbakọ: Carton Ihe: igwe na enamel n'ime. Ọkpụkpụ nke a na -eme ka a na-amịkọrọ okpomọkụ dị mma ma zuo oke maka ịkpụ mbọ. Atingcha mkpuchi enamel ahụ na-enwe mmetụta na-adịghị esochi. Kwesịrị ekwesị maka ndị na-esi esi esi nri: a nwere ike iji pan ahụ mee ihe na ụdị ndị na-esi nri, gụnyere ntinye. Enwere ike iji mmiri mee ihe: a ga-eji ya na oven na na egho n’enweghị nsogbu. Ohere dị na ala nke pan ahụ na-ahụ na abụba na-apụ ma…
Ihe Ngwaahịa: HF 87A Ihe: Enamel Size: DIA: 23 * 23CM mbukota: Etu: Carton ihe eji: en cast iron with enamel ciki. Ọkpụkpụ nke a na -eme ka a na-amịkọrọ okpomọkụ dị mma ma zuo oke maka ịkpụ mbọ. Atingcha mkpuchi enamel ahụ na-enwe mmetụta na-adịghị esochi. Kwesịrị ekwesị maka ndị na-esi esi esi nri: a nwere ike iji pan ahụ mee ihe na ụdị ndị na-esi nri, gụnyere ntinye. Enwere ike iji mmiri mee ihe: a ga-eji ya na oven na na egho n’enweghị nsogbu. Ozo nke di na elu nke ogwe a na - eme ka abuba dichapu ya bu na ha hi ...
Ihe Ngwaahịa: Ihe JT: Enamel Size: DIA: 33.3 * 21.8 * 3.2. Nkwakọ ngwaahịa: Carton Ihe: tinye iron na enamel n'ime. Ọkpụkpụ nke a na -eme ka a na-amịkọrọ okpomọkụ dị mma ma zuo oke maka ịkpụ mbọ. Atingcha mkpuchi enamel ahụ na-enwe mmetụta na-adịghị esochi. Kwesịrị ekwesị maka ndị na-esi esi esi nri: a nwere ike iji pan ahụ mee ihe na ụdị ndị na-esi nri, gụnyere ntinye. Enwere ike iji mmiri mee ihe: a ga-eji ya na oven na na egho n’enweghị nsogbu. Obosara ahihia di na elu na –eme ka abuba wepu ya na azu…
Ihe Ngwaahịa: HF70A ， HF 71A Ihe: Enamel Size: DIA: 6.5CM ， DIA: 8 CM Mbukota: Ihe eji eme ihe: ihe nkedo nke enamel n'ime. Ọkpụkpụ nke a na -eme ka a na-amịkọrọ okpomọkụ dị mma ma zuo oke maka ịkpụ mbọ. Atingcha mkpuchi enamel ahụ na-enwe mmetụta na-adịghị esochi. Kwesịrị ekwesị maka ndị na-esi esi esi nri: a nwere ike iji pan ahụ mee ihe na ụdị ndị na-esi nri, gụnyere ntinye. Enwere ike iji mmiri mee ihe: a ga-eji ya na oven na na egho n’enweghị nsogbu. Ozo nke di na ogwe pan ahu na - eme ka abuba ahu na-echere ...
Ihe Ngwaahịa: JT B29, JT B34 ： Ihe: Cast Iron Enamel Size: 30 * 23 * 11，33.5 * 25.5 * 13.3 Mbukota: igbe 1.Lighter na enamel mara mma zuru oke maka isi nri na ije ozi. 2.Scratch na-eguzogide, ihe na-eguzogide mmiri, anaghị egbu egbu, matri ojii enamel dị n'ime ime. 3.Sure-adịgide, aka dị obosara iji jide nkasi obi na nkwụsi ike. Ntọala 4.Thicker na -emepụta nkesa ọkụ ka ukwuu. Ihe eji edozi ube 5.Eme ka basting nke ime nye ihe oriri di uto.
Ihe Ngwaahịa: JT B29, JT B34 ： Ihe: Cast Iron Enamel Size: 30 * 23 * 11，33.5 * 25.5 * 13.3 Mbukota: igbe 1.Ligter na enamel mara mma zuru oke maka isi nri na ije ozi. 2.Scratch na-eguzogide, ihe na-eguzogide mmiri, anaghị egbu egbu, matri ojii enamel dị n'ime ime. 3.Sure-adịgide, aka dị obosara iji jide nkasi obi na nkwụsi ike. Ntọala 4.Thicker na -emepụta nkesa ọkụ ka ukwuu. Ihe eji edozi ube 5.Eme ka basting nke ime nye ihe oriri di uto.
Ihe Ngwaahịa: JT B29, JTB34 erial Ihe: Cast Iron Enamel Size: 30 * 23 * 11，33.5 * 25.5 * 13.3 Mbukota: igbe 1.Ligter na enamel mara mma zuru oke maka isi nri na ije ozi. 2.Scratch na-eguzogide, ihe na-eguzogide mmiri, anaghị egbu egbu, matri ojii enamel dị n'ime ime. 3.Sure-adịgide, aka dị obosara iji jide nkasi obi na nkwụsi ike. Ntọala 4.Thicker na -emepụta nkesa ọkụ ka ukwuu. Ihe eji edozi ube 5.Eme ka basting nke ime nye ihe oriri di uto.